एक दशकपछि विकट वस्तीमा आँगनमै पानीको धारा : RajdhaniDaily.com
Homeप्रदेशएक दशकपछि विकट वस्तीमा आँगनमै पानीको धारा
मुगु । मुगु जिल्लाको विकट वस्ती सोरुगाउँ पालिका वडा नं ८ आसीधारा गाउँका २८ घरमा एक दशकपछि घरमा खाने पानीका धारा जोडिएको छ ।
२०६४ साल भन्दा अगाडी देखी गाउँमा एक मात्र धारा थियो । उक्त धाराको पनि पाइप बिग्रिएपछि आधा घण्टा हिँडेर खानेपानी लिन जान वाध्य थिए गाउँलेहरु । गाउँमा भएको परम्परागत धाराको मुहान सुकेपछि १२ बर्षदेखी टाढाबाट खाने पानी ल्याउन वाध्य गाउँलेहरु अहिले मख्ख छन् । नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विश्व खाद्य कार्यक्रम क्यापस कणाली परियोजनाको आर्थिक सहयोगमा घरघरमा धारा उपलव्ध भएपछि स्थानिय खुसी छन् ।
सहयोगका लागि विभिन्न निकाय र संघ सस्थामा धाए पनि पानी खाने सपना पुरा नभएपछि निरास भएका गाउँका स्थानिय अहिले भने स्वच्छ पानी पिउन पाउने भएका छन् ।
२८ घरधुरीलाई एक घर एक धारा ल्याउन २ किमी टाढावाट २४ लाख ६५ हजार बजेट विनियोजन गरि घरैपिच्छे धारा उपलव्ध गराएको हो ।
स्थानिय.सिता रोकाया भन्छिन् ‘गाँउमा रहेको पुरानो मुल सुकेपछि ६४ सालदेखी आधा घन्टा पर रहेको नाउलो(कुवा)बाट पानीको प्यास मेटाउदै आएका थियौ ।’ कुवा सानो भएकाले गाँउलेहरु पालो कुरेर पानी भर्न वाध्य थिए । उनको भनाई अनुसार धारो बनाइदिन प-यो भन्दै गाउँ विकास समिती, जिविस, एनजिओ सबैलाई गुहारे पनि आश्वासन बाहेक केही नपाएको उनको भनाई छ ।
२४ घण्टामा भएका समाचारहरु पढ्नुहोस किर्ते दस्तखत गरी अर्कैको नामको २७ लाख रुपैँया झ्वाम्
गाँउमा धारा नहँुदा गाउँले कुवौ पानी खान विवस थिए सबैको एउटै कुवा प्रयोग गर्दा पानी प्रदुषित हुनुको साथै रुघा, खोकी, झाडा पखाला जस्ता समस्या पनि हुने गरेको थियो ।
क्यापस परीयाजनाले आफुहरुको धाराको पानीखाने सपना पुरा गरिएकोमा स्थानीय सहयोगी सबैलाई धन्यबाद दिन चाहन्छन् । अर्का स्थानिय प्रेम वहादुर रोकायाका अनुसार संगैका अन्य छिमेकी गाँउमा खानेपानीका धाारा भएपनि आफुहरुले कुवाकै पानी खानु पर्दा दुःख लागेको बताउछन् ।
१० वर्ष पछि घरकै आगनमा खानेपानीका धारा बनेपछि गाँउलेहरुको मुहारमा खुशी छाएको छ । गाँउले मात्र होईन गाँउमै रहेको विद्यालयमा पनी पानीको धारा उपलब्ध हुँदा विद्यार्थीलाई पनि सहज भएको छ ।
कूल २४ लाख ६५ हजार हजार सातसय अनुदान– निमार्ण भएको यस खानेपानी आयोजनाबाट २८ घरधुरीका २ सय ९० परिवार लाभान्वित भएका छन ।
ओम बानियाँ -
डाह वा इष्र्या मानिसको एक सामान्य भावना हो । यो भावना हरेक मानिसमा कुनै न कुनै रूपमा विद्यमान हुने गर्छ । फरक यति हो,...
रोजिनाको मृत्यु भएको तीन दिनसम्म पनि पोष्टमार्टम भएन
काठमाडौं । मोरङको सुन्दरहरैँचा–८ सलकपुरकी २१ वर्षीय रोजिना गिरी (काफ्ले) को मृत्यु भएको तीन दिनसम्म पनि पोष्टमार्टम हुन सकेको छैन । आइतबार बिहान सात...
काबुल । तालिवानले आँचरण तथा दण्डमामिला मन्त्रालय व्युँताएको छ । सन् १९९६ मा पहिलो शासनकालमा तालिवानले सो मन्त्रालयले गठन गरेको थियो । देशमा कठोर...
म्युजिक भिडियो ‘सोच्दैछु’ सार्वजनिक
काठमाडौं । म्युजिक भिडियो 'सोच्दैछु' सार्वजनिक भएको छ। सुजन अधिकारिको शब्द तथा स्वर रहेको गीतमा इन्द्र आरपीको संगीत सुन्न सकिन्छ। गीतलाई एरेन्ज सुरज साही...
‘चीनबाट उद्धार गरिएका अझै आठ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने
काठमाडौं । चीनको हुबेई प्रान्तबाट उद्धार गरी नेपाल ल्याइएका १ सय ७५ जनालाई अझै आठ दिन भक्तपुरको खरिपाटीस्थित विद्युत् प्राधिकरण तालिम केन्द्रको क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ...
नयाँ बसपार्कमा काठमाडाै छाड्ने यात्रुको भीड
काठमाडाैं । गोङ्गबुस्थित नयाँ बसपार्कमा घर जाने यात्रुको भीडभाड बढेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सोमबार बसेको...
श्रीमानलाई दागवत्ति दिएपछि सिंन्दुर पोतेमै फर्किइन् रेनुका
मन्त्रिपरिषद् गठन प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार
कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर आउनसक्छ सचेत रहौंः मन्त्रालय
कोरियामा १८ जना नेपालीलाई कोरोना संक्रमण
सरकार ! निजी सवारी साधनले कोरोना सार्दैन ?
ज्यान मार्ने उद्योगमा फरार अभियुक्त तुलसीपुरमा पक्राउ
सुभाष साह - September 20, 2021